Landa i-Boeing C-32 Air Force Two USAF FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 87.7 MB
Play 7 979
Umbhali: Imodeli ngu-TDS, VC ka-Alejandro Rojas Lucena noKen Wiggington, oyilungisa kabusha uCandyman. Ilungiselelwe futhi iqoqelwe P3D & FSX nguChris Evans. Sibonga ngokukhethekile kuChris Evans ngesikrini
I-Boeing C-32 iyindiza yezokuthutha ezempi yase-USAF etholakala ku-757-200. Okwamanje isebenza njenge Air Force Two. (Ulwazi olubanzi ku-Wikipedia).
I-Air Force Two iyisignali yocingo esetshenziswa yizindiza ze-US Air Force ezithwele i-Vice-President we-United States ngaphandle kokuthi uMengameli we-United States naye ebhodini lapho kwenzeka khona indiza izobizwa nge-Air Force One.
Akukho engingakusho kulokhu okungezwe kwekhwalithi enhle kakhulu ehambisanayo (phakathi kwabanye) nge Prepar3D I-v4, qaphela ukuthi i-cockpit ebonakalayo yile ye-737-800 (ene-FMC namanye amageyimu awusizo) esiseduzane neBoeing C- 32. Imisindo (eyiqiniso) ivela ku-Boeing 757 i-C-32 yayo i-derivative. Ngiyabonga ngokukhethekile Chris Evans for the screenshots kanye nomqondo wephakheji.